EVY's Kitchen: ပြည်ဆန်လှော် မုန့်ဟင်းခါး
တရုပ်နှစ်ကူးမှာ လုပ်စားဖြစ်တဲ့ ပြည်ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါးပါ။ ပြည်က နာမည်ကြီး နွယ်နွယ်ဆန်လှော်မှုန့်ကို သုံးထားတာပါ။ အိမ်နဲ့က ရင်းနှီးနေတော့ အရင်တစ်ခေါက် ပြန်တုံးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆန်လှော်မှုန့်တွေပေါ့။ ငါးခူကိုသုံးပြီးချက်ထားတာ့ အရမ်းလဲချိုပါတယ်။ ပြည်အလွမ်းပြေပေါ့။
ဒီပို့နဲ့အတူ FOOD Magazine မှာရေးထားတဲ့ ပြည်အကြောင်းဆောင်းပါးလေးပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး
Posted by Evy at 2:09 PM
ဒီနေ့တော့ ကြက်ခြေထောက်ဝယ်လာဖြစ်လို့ Evy ရဲ့နည်းနဲ့ ချက်ကြည့်အုံးမယ်။ တခါမှမလုပ်ဖူးပေမယ့် ကြည့်ရတာလွယ်လို့ လုပ်ကြည့်မလားလို့။ ကျေးဇူးပါနော်။ Evy နဲ့မိသားစု ကျန်းမာချမ်းသာပါ စေရှင်။
တီတင့်အိမ်မှာလည်း ဒီကနေ့မုန့်ဟင်းခါးချက်တယ် Evyရေ။ ဆန်လှော်မှုန့်နဲ့ ရွှေကြည်မှုန့်ကိုသုံးတယ်း)
ပြည်ဆန်လှော်မုန့်ဟင်းခါး ချက်နည်းလေးပါ တင်ပေးပါနော်.. မြင်ရတာနဲ့ စားချင်လာလို့ပါ.
Could you please write ဆန်လှော် မုန့်ဟင်းခါး recipe? I would like to cook. thank you in advance.